Haweeney Muslim-ah oo $85,000 Abaal Marin Loo Siiyay - Dadka - Jilaa News - Falanqeynta Fanka iyo Fanaanka
Haweeney Muslim-ah oo $85,000 Abaal Marin Loo Siiyay
Magaalada Long Beach ee Loss Angles ayaa aqbashay kadib markey gabar muslim ah dacawad ka oogtay booliska oo si qasab ah uga furay xijaabkeeda. Gabadhan ayaa qaadaneysa lacag dhan $85,000 oo lacagta dalkas ah.
Kirsty Powell oo madowga dalkas ah isla markan muslim ah ayaa mar ey booliska xireen sanadkii 2015.
Gabadhan iyo ninkeeda oo wata baabuur dhulka ku dhagan ayaa waxa istijiyay booliska, kadib marki ay u dhiibtay aqoonsigeeda ayey booliska diiwankeeda ka heleen in xarig loo qoray sanadkii 2001 halkasoo loo heysto iney wax xaday.
Marki ay booliska xirayeen ayey ka qaadeen xijaabkeeda taasoo ka hor imaneysa sharciga dalkas. Gabadhan ayaa ku edeysay xabsiga iney u diideen iney xirato xijaab taasoo nimanka shaqeynayay xabsiga arkayeen timaheeda tasoo u habonen dinta Islamka.
Mareykanka oo Laga Qaxaayo
Dalka Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqay in ay berito ciid tahay bishana laga arkay.
Milkiilaha Facebook oo la afuray qaxooti Soomaali ah.
Sidee ayuu Obama ugu dabaal dagay maalinta jaceylka ee Valentine's day.